Ma fiicantahay mise waa xun tahay in taleefankaaga Android uu had iyo jeer shito? | Androidsis
Runtii ma wax xunbaa inaad haysatid taleefankaaga Android markasta?
Qiyaasta batteriga taleefankayaga Android waxaa had iyo jeer ka jira khuraafaad iyo warar xan ah. Ka soo ku habboon in ay soo baxdo in la isticmaalo nooc ka mid ah asalka ama tabaha lagu keydiyo batteriga. Dood wadaag ayaa ah in lagu taliyo iyo inkale in taleefanka la damiyo habeenkii ama waqti ka waqti. Dad badan ayaa taleefannadooda casriga ah ku shaqeeya wakhti kasta. Wax ay dadka qaar yiraahdaan isku si uma wanaagsana.
Maxay ku run tahay faallooyinkaas? Dhab ahaantii miyay haysataa taleefankeena Android markasta? Mise waa mid ka mid ah quraafaadyada badan ee ku saabsan batteriga ku shaqeeya Android? Kadib waxbadan ayaan kaaga sheegeynaa wararkaas xanta ah in aan muddo dheer ka maqalnay suuqa.
Caqli ahaan, waa wax ku tiirsan adeegsade kasta. Laakiin waxa caadiga ah waa taas isticmaalka culus ee taleefanka ayaa la sameeyaa. Waxaa loo isticmaalaa maalin kasta in la waco, la maro, la isticmaalo barnaamijyada ama ciyaaraha, markaa waa wax iska caadi ah in ay jiraan isticmaaleyaal aan weligood damin. Halka qaarkood ay damiyaan habeenkii. Labada ikhtiyaarba waxay leeyihiin dad badan oo wax u dhimaya sida kuwa raacsan.
Mid ka mid ah dhinacyada ay tahay in laga fikiro markasta ayaa ah in taleefannada casriga ahi ay yihiin qalab adag. Kaliya kuma koobna qaybo faro badan, laakiin sidoo kale waxaan haynaa habab badan oo socda haddii aan si joogto ah u isticmaalno taleefanka. Sidaa darteed, tani waa wax sababi doona duugoob iyo jeexjeex markasta. Ma aha wax la inkiri karo xaalad kastoo jirta. Laakiin dareenkan, waxaa jira qaybo badan oo xasaasi ah.
Batariga taleefanka Android waa qayb ka mid ah oo u muuqata in badan oo ka mid ah dharka la sheegay. Sidaa darteed, waxaa jira xaalado lagu ogaanayo isticmaalka sare, xitaa nasasho. Ama waad arki kartaa in batteriga uu soconayo waqti ka yar sidii uu markii hore ku shaqeynayay. Kuwani waa dhinacyo inta badan isticmaaleyaashu ay kala kulmeen taleefankooda mar uun. Marka xirashada iyo jeexitaanku waa wax aakhirka ku qaadanaya culeyskeeda batari taleefan la sheegay.
Sidaa darteed, waxaa jira khubaro badan oo arrintaas ka faalooda fasax waa in la siiyaa waqti ka waqti ku saabsan telefoonka Android. Nasasho la bixin karo iyadoo la damiyo taleefanka, loona daayo inuu xoogaa fadhiisto iyadoo aan la isticmaalin. Sidaa darteed xirashada iyo jeexjeexa waa la yareyn karaa, marka lagu daro joojinta howlaha badan ee socda, kuwaas oo daqiiqadaha qaar guuldarreysan kara isla markaana sababi kara in taleefanka uu yeesho xoogaa dhibaato ah oo xagga howlaha ah.
In kasta oo ay suurtagal tahay inay jiraan isticmaaleyaal aan dami karin taleefanka, tusaale ahaan sababo shaqo awgood. Sidaa darteed, dadka isticmaala taleefanka Android xaaladaha noocaas ah, taladu waa in dib loo bilaabo taleefanka. Kaliya maahan hab lagu saxo qaladaad badan xaaladaha qalliinka ee ka dhaca, sidoo kale waa hab lagu siiyo xoogaa nasasho ah. Qaarkood waxay ku andacoodaan inay taasi gacan ka geysan karto hagaajinta nolosha taleefankaaga.
Ma aha wax la caddeeyay, laakiin khubaro badan ayaa rWaxay kugula talinayaan in dib loo bilaabo taleefanka dhowr jeer usbuucii. Marka waa suurtagal in nasashadaas la siiyo Android xagga hawlgalka. Waa wax qof kastaa samayn karo sidoo kale haddii aad haysato taleefan casri ah oo wata batariga aan laga saari karin. Inkastoo aysan qasab ahayn. Haddii isticmaaluhu uusan damin taleefankooda badanaa, sidoo kale ma aha calaamad muujinaysa in taleefanka uu ka sii xumaan doono. Laakiin waa suurtagal inay ku xanuunsato xirashada kiiskan oo kale.
Mawduuca daminta taleefankaaga Android habeenkii waxaa jira doodo badan. Inbadan waxay kugula talinayaan tan inay tahay mid lagu badbaadiyo nolosha batteriga ee taleefanka iyo sidoo kale yareynta duugista iyo jeexjeexka uu taleefanka iyo qeybihiisu maanta la il daran yahay Laakiin ma aha sababta kaliya ee ay tahay in tixgelin la siiyo arrintan.
Dareenkan ayaa leh wax badan oo la sameeyo ku tiirsanaanta dadka isticmaala badan ee taleefannadooda Android. Waxaa jira tilmaamo qaar ka mid ah kuwa isticmaala si ay u awoodaan yaree ku tiirsanaanta taleefankaaga, sida loo isticmaalo ha dhibin hab markasta. Laakiin taleefanka oo la damiyo habeenkii waa arrin kale oo laga fiirsado. Tan iyo markii laga reebo kiisas yar, dadka isticmaala uma baahna inay diyaar noqdaan 24 saacadood maalintii.
Waayo, uma baahna inay mar walba taleefanka haystaan. Markaa mararka qaarkood way fiicantahay in la damiyo oo telefoonka laga naso sidoo kale. Tani waa wax la samayn karo habeenkii haddii la doono oo sidaas awgeed aan wax dhib ah dareemin habeenkii, in kasta oo qof kastaa dooran karo goorta uu doonayo inuu damiyo taleefankiisa Android. Laakiin waxaa lagugula talinayaa in mararka qaarkood la sameeyo. Maaha wax badan in la kordhiyo nolosha taleefanka ee su'aasha, laakiin inaad waqti yar u hesho naftaada, taas oo waliba ahmiyad weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Runtii ma wax xunbaa inaad haysatid taleefankaaga Android markasta?
Sida loo badalo magaca xiriiriyaha WhatsApp